114 Sano Kadib Ayay Raali Gelin Ka Bixiyeen Wiilka ay Xerada Gelisay Beerta xayawaanka ee Bronx | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Afrikaan.so — September 3, 2020
Dhacdadaan waa dhacdo dhabta ah oo ay ku dhacday nin dhalinyaro ah oo reer Koongo, oo laga soo qafaashay dalkiisa waxaana la keenay Mareykanka. Waxaa la qabtay bishii Maarso sanadkii 1904-tii, waxaa Koongo ka qabtay ganacsade Mareykanka u dhashay oo la yiraahdo Samuel Verner, Inkasta oo aan xilliggaas la ogeyn da’diisa balse waxaa lagu qiyaasay 12 ama 13 jir.
“Mid ka mid ah sheekooyinka ugu xiisaha badan ee ku saabsan saameynta horumarka ee xiriirka aadanaha waa sheekada Ota Benga, oo ah nin caan ah oo lagu soo bandhigay beerta xayawaanka ah tusaale ahaan isir ahaan liidata. Dhacdadu waxay si cad u muujineysaa midabtakoorka aragtida isbeddelka iyo heerka ay aragtidu qabatay quluubta iyo maskaxda saynisyahannada.” ~ Jerry Bergman, Ph.D
Ota Benga ayaa sannadkii 1904 laga afduubtay halka maanta loo yaqaano Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, waxaana la geeyay beer lagu xanaaneeyo xayawaanada oo ku taalla dalka Mareykanka si dadku ay ugu daawasho tegaan, weriye Pamela Newkirk, oo wax ka qortay xaaladda wilkan ayaa ka shekeyneysa tobbonaan sanno kaddib sida ay wax u dhaceen.
In ka badan muddo qarni ah kaddib markii warbaahinta caalamka ay siyaabo kala duwan uga hadashay wiil yar oo Afrikaan ah oo la geeyay beer lagu hayo daanyeerka si dadku ay u daawasho tegaan, beerta xayawaanka Bronx Zoo oo ku taalla New York ayaa ugu dambeyntii raalli gelin ka bixisay wiilka lagu hayay halkaas.
Agaasimaha ururka ilaalinta duur joogta (WCS) Cristian Samper, wuxuu sheegay in beertaas oo ay maamulaan ay ka go’antahay in si hufan ay u abaarto dhacdadaas oo si weyn ay u baahiyeen warbaahinta Yurub iyo Mareykanka 9-kii bishii September sanadkii 1906-dii, maalin uun kaddib markii Ota Benga lagu soo bandhigay beerta tan iyo markii lasii daayay 28-dii bishii September sanadkii 1906-dii.
Qaabka ilkaha waxaa ku dhaqma ragga iyo dumarkaba qabiilooyinka Pygmies-ka Koongo iyo dadka Mentawai ee Indonesia. Carruurta ka soo jeeda labada qabiil ayaa ilkahooda u xareeya qayb ka mid ah dhaqankooda ruuxi ah iyo cibaadada — si ay u muujiyaan inay u qalmaan qabiilka. “
‘Wuxuu ahaa shaqaalaha beerta’
Horraantii sanadkii 1906-dii, warqad kasoo baxday beerta xayawaanka ayaa muujineysa in saraakiisha in Ota Benga uu ahaa shaqaalaha beerta xilli la dhaleecenayay dhacdadaas.
Waa kumaa Ota Benga?
Waxaa la qabtay bishii Maarso sanadkii 1904-tii, waxaa Congo ka qabtay ganacsade Mareykanka u dhashay oo la yiraahdo Samuel Verner, Inkasta oo aan xilliggaas la ogeyn da’diisa balse waxaa lagu qiyaasay 12 ama 13 jir.
Waxaana lagu qaaday markab, waxaa la geeyay New Orleans, sanad kaddib waxaa lagu soo bandhigay goob ku taalla St Louis isaga iyo 8 wiil oo kale.
Wuxuu bandhiggaas socday ilaa xilligga qaboobaha, lamana siin wax dhar ah oo ay dhaxanta isaga celiyaan.
Bishii September ee sanadkii 1906-dii, waxaa 20 maalmood lagu hayay beerta xayawaanka ee ku taalla New York ee Bronx Zoo, dad fara badan ayaa usoo daawasho tegay.
Waddaado kiristaan ah ayaa ka carooday arrintaas, taas waxay horseeday in laga sii daayo beerta, waxaana la geeyay xarun lagu xanaaneeyo agoonta oo uu maamuli jiray nin la yiraahdo James H Gordon.
Bishii Jannaayo sanadkii 1910-kii, wuxuu aaday kuleej ay dhigtaan ardeyda madowga ah oo ku yaallay Virginia.
Waxaana markii dambe lagu soo warramay in uu lasoo dersay welwel, bishii Maarso sanadkii 1916-kii waa uu is dilay kaddib uu isku dhuftay qori uu qarsanayay, waxaana loo maleynaya in da’diisu ay aheyd 25.
Isha: Buugga la qoray nolosha Ota Benga
Agaasimaha ururka maamula xaruntan ayaa sheegay “In si weyn ay uga shaleynayaan in dad iyo jiilal badanba ay waxyeelleysay arrintani ama inay horey ay ugu guuldareysteen in si cad ay u dalleeceeyaan dhacdada”
Beerta xayawaanka ee Bronx
Tags: 114 Sano Kadib Ayay Raali Gelin Ka Bixiyeen Wiilka ay Xerada Gelisay Beerta xayawaanka ee Bronx
Next post Itoobiya iyo Aragtidii Friedrich Ratzel (Lebansraum)
Previous post Wargeyska Charlie Hebdo: "Mar Dambe Sawir Gacmeed Kama Sameyn Doono Nabi Muxamed NNKH" - Balse Markale Ayey Dib u Daabaceen